China Girl's Real Down Jacket ụlọ ọrụ na-emepụta | Na-ada
Size iche: XS-XXXL
Ibu ala: 55g
Nha 80/48 90/52 100/56 110/56 120/60 130/64 140/64 150/72 155/76 160/80
Centre azụ azụ ogologo 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63
AKW WKWỌ OZI 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104
N'ala ala 57 61 65 69 72 75 78 81 84 87
KWESR W KWES WR W 26.5 28 29.5 31 32.5 34 35.5 37 38.5 40
OGOLOGO AKA UWE 32 36 39 42 45 48 51 54 57 60
MUSCLE obosara 28.4 29.2 30.6 32 33.4 34.8 36.2 37.6 39 40.4
Q. : Ndi gị emeputa ma ọ bụ ahia ụlọ ọrụ?
A: Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ijikọ ahịa ụlọ ọrụ ọkachamara na mmepụta uwe maka ọtụtụ afọ ugbua, n'ime Changzhou, Jiangsu ógbè China. Nke anyi ụlọ ọrụ nwee gafere IS09001: 2016, 2016 Akwụkwọ WRAP. Na anyị nwere akwụkwọ RCS, RDS, OCS. Ọzọkwa anyị nwere buru ibu nkwakọba na ogo njikwa ngalaba maka n'ichepụta ngwaahịa maka ndị ahịa.
Q .: Kedu ka ịtụ?
A: Biko zipu anyị nke gi zuo iji site na Email ma ọ bụ Kpọọ anyị, ma ọ bụ anyị nwere ike -eme ka gị rụọ akwụkwọ ọnụahịa n'okpuru nke gi arịrịọ. Anyị mkpa ka mara ihe na-eso ozi maka nke gi iji tupu izipu gị PI. 1) Ngwaahịa ozi-Otutu, Nkọwapụta (Nha, Ihe onwunwe, Teknụzụ ọ bụrụ chọrọ na Mbukota chọrọ wdg) 2) Nnyefe oge chọrọ. 3) Mbupu ozi-Company aha, Okporo Adreesị, Ekwentị & Faksị nọmba, Ebe njedebe oké osimiri n'ọdụ ụgbọ mmiri. 4) Gbanwee kọntaktị nkọwa ọ bụrụ enwere ọ bụla n'ime China.
Q .: Kedu ogologo bu ihe nlele oge? Ndi ihe nlele ego nwere ike ịbụ laghachiri?
A: ofgba akaebe bu na-emekarị 5-7 na-arụ ọrụ ụbọchị. Ọ bụrụ ihe iji iru ma ọ bụ gafere n'azụ MOQ ibu, nyocha ego nkwụghachi. Ọ bụrụ ọ bụghị ruru n'azụ MOQ ibu, nyocha ego ga ịbụ were site na gị.
Q:: Kedu ka njikwa àgwà?
A: Ihe niile ihe nke ndu ihe site na IQC (Na abata Ogo Njikwa) tupu igba egbe dum usoro n'ime ihe usoro mgbe ihe echetakwa.
B ：Usoro onye obula njikọ n'ime ihe usoro nke IPQC (Ntinye usoro ogo njikwa) patrol nnyocha.
C ：Mgbe Emechara site na QC zuru nnyocha tupu mbukota n'ime ihe Osote usoro nkwakọ ngwaahịa.
D ：OQC tupu Mbupu maka onye obula uwe ka mee zuru nnyocha.
Nke gara aga: 'Smụ nwoke Goose Down jaket
Jaketị Downet Girl
Egweri Girl Down jaket
Recycle Girl si Faux Down jaket